Indlela yokuthola ukuhumusha kwe- "Western Union" eRussia? Ngingayithola kanjani ukudluliselwa kwe-Western Union eSberbank nase-PrivatBank?
I-Western Union yindlela yokudlulisela imali yamazwe ngamazwe eye yazakhela njengomhlanganyeli othembekile futhi ophephile emakethe. Izinsizakalo zezezimali zinikezwa inkampani yaseMelika ngokusebenzisa ama-agent kwamanye amazwe. Imininingwane eminingi yokuthi ungathola kanjani ukuhunyushwa kwe- "Western Union" eRussia nase-Ukraine, funda.
I-Western Union yasungulwa ngo-1851 yiqembu lamabhizinisi aseNew York. Ekuqaleni abaphathi babambe iqhaza ekuhlengeni iziteshi ze-telegraph ezingenakubalwa, bezihlanganisa zibe inethiwekhi eyodwa. Ngo-1860, inkampani inqobe ithenda yokudala umzila wamamayela we-2000 we-transcontinental. Ngo-1866 uhlelo luxhunywe emakethe yokushintshanisa. Ukudluliswa kwemali kokuqala kwenziwa ngo-1871. Le ngxenye izoba yinto eyinhloko yenkampani eminyakeni elandelayo yentuthuko. Ngo-1914, kwavela amakhadi okudonswa. Ngo-1920, ukudluliselwa kokuqala kwe-transatlantic kwesithombe sithombe kwenziwa. Kusukela ngo-1981, inkampani ingene emakethe yamazwe ngamazwe futhi manje inikeza izinsizakalo zokudlulisela imali kuwo wonke amazwe omhlaba. Imali ngokusebenzisa uhlelo ingathunyelwa ngisho nasedolobheni eliseduze.
Kunezindlela eziningana zokuthola ukudluliselwa kwe-Western Union nokuthumela imali:
1. Ehhovisi lebhange. Ukwenza ukuthengiselana kubalulekile ukunikeza ipasipoti, ulwazi lomamukeli noma inombolo yokudlulisa.
2. Ukwethembeka nokuthumela izimali kumaklayenti ase- "CreditEurope Bank" angayisebenzisa nge-ATM "yasekhaya".
3. Ngingayithola kanjani i-Western Union ukudluliselwa eRussia ngaphandle kokushiya ekhaya? Sebenzisa ibhange le-intanethi. Isevisi yasemakhaya ihlinzekwa kuphela isikhungo sesikweletu sezwe - "i-Bank Avangard".
4. Thumela imali ngisho nakwamanye amazwe ngenani elingadluli ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-15. Kungenzeka futhi nge-self-service terminal. Ikhadi noma ipasipoti ngeke kudingeke kuklayenti.
5. Ngingayithola kanjani inguqulo ye "Western Union" kumuntu ongathembeli ubuchwepheshe bamuva? Eposini yeposi. Izimali zikhishwa kuphela kuma-ruble kanye nepasipoti.
Okuningi mayelana nesistimu
Isimiso somsebenzi ukunikeza i-code ehlukile yokuhunyushwa kwekhodi, lapho ungayibona khona umamukeli noma kuphi emhlabeni. Ukudluliswa okusheshayo - izimali zitholakala ukuhoxiswa emaminithini ambalwa (ngezinye izikhathi amahora) ngemuva kokufakwa kwesicelo.
Eqinisweni, imali ikhokhwa ngaphambi kokuba yamukeleke yibhange kumamukeli, bese-ke izikhala zomphakathi phakathi kwezikhungo zezikweletu zenziwa. Izinzuzo eziyinhloko zesistimu yijubane lokucubungula ulwazi kanye nenethiwekhi enkulu yamaphuzu enkonzo.
Ungayithola kanjani ukuhunyushwa kwe- "Western Union"?
Imigomo yokuthengiselana incike kakhulu emthethweni wezwe. Okokuqala, iBhange Elikhulu libeka imingcele ekusetshenzisweni kokudluliselwa kwamanye amazwe nakwamanye amazwe. Okubaluleke kakhulu futhi ubuzwe - abangeyona izakhamuzi umkhawulo ngokuvamile uvame kakhulu. Uhlelo luyamukela ama-dollar kanye ne-euro ukudluliswa, kodwa ngaphakathi kokuthengiselana kombuso olulodwa kwenziwa enyunithi yezimali kazwelonke. Ukuze uthole ukuguqulwa kwemali (thumela ama-ruble, thola i-euro) kuzodingeka ukhokhe. Amanani ahlelwe ngokwahlukana esifundeni ngasinye, kodwa ikhomishini ihlale ikhokhelwe umthumeli.
Indlela yokuthola ukuhumusha kwe-Western Union eRussia? Kudingeka ukuthi usebenzise kwenye yamagatsha enkampanini, unikeze opharetha ngekhodi yesicelo, ipasipoti, ucacise izwe lomthumeli. Ikhomishana yokuthengiselana ikhokhwa ngumthumeli. Uma inani lidlula imigomo esemthethweni, ke ngaphandle kokuvula i-akhawunti, imali ngeke idluliselwe.
Indlela yokuthola ukudluliselwa kwe-Western Union eSberbank? Okwamanje, akukho ndlela. Nakuba isivumelwano sokubambisana sisayinwe ngo-2011, le sevisi ayitholakali okwamanje. Ungafaka isicelo kunoma yiliphi igatsha le-VTB 24, i-Alfa-Bank, i-Gazprombank, i-MDM, i-Bank yaseMoscow, i-KMB, njalonjalo.
Indlela yokuthola ukuhunyushwa kwe- "Western Union" eSaransk? Uma kungenakwenzeka noma isifiso sokufaka isicelo ebhange, ungasebenzisa izinsizakalo ze "Post of Russia", kodwa esimweni sokuthi imali ithunyelwe kusuka phesheya. Lo mkhawulo usungulwe ukuze ugweme ukuncintisana nezinsizakalo zakho. "Imeyili yaseRussia" ayamukele izicelo zokudluliselwa emazweni e-CIS.
Ungayithola kanjani i-Western Union ukudluliselwa ku-PrivatBank?
Ibhange elikhulu kakhulu lase-Ukraine lihlinzeka izinhlelo zokusebenza nge-Privat24. Ungafaka imali kwi-akhawunti noma ekhadini le-WU noma esikhungweni sezimali. Ukuze udlulise imali, udinga ukukhetha i- "Western Union" kwimenyu "Yokudlulisa", faka ikhodi yokulawula, imali, inani lokuthola, igama. Futhi izwe lomthumeli. Ngemva kokucubungula ifomu, idatha yokudlulisa izoboniswa. Into yokugcina okudingeka ukwenze icacise i-akhawunti lapho ukudluliselwa kuzokwenziwa khona.
Indlela yokuthumela imali?
Lapho sibhekene nendlela yokuthola imali yaseWestern Union, sibhekene nenkinga yokubhaliswa kwesicelo. Ukuze uthumele imali nge-Western Union, udinga ukuxhumana nephoyinti yesevisi (ibhange, igatsha lenkampani, kwamanye amazwe - iposi). Uhla olusha lwezinto lungatholakala njalo kuwebhusayithi yenkampani. Ukuze wenze isicelo kufanele unikeze:
Igama eligcwele Umzuzi wokudluliselwa;
Izwe eliya khona.
Opharetha wale fomu yedatha isicelo. Khona-ke kumele ikhokhelwe: ngekheshi noma kusuka ekhadini (ikhomishini yamasevisi ebhange angabhalwa). Uma imali idluliselwa phakathi kwama-akhawunti, kuzodingeka futhi ukuhlinzeka nge-BIC (ikhodi yokukhomba yasebhange), i-IBAN, inombolo ye-akhawunti.
Uhlelo lunikeza inani eliyingqayizivele lamadijithi ayishumi kuhlelo lokusebenza. Uyobe efakwe ohlwini lokuthola izimpahla.
Ngaphezu kwalokho, ungahlela lezi zinsizakalo:
Ukuthunyelwa kokudluliselwa ekhelini elichaziwe (alitholakali ezweni ngalinye);
Isaziso somamukeli mayelana nokuthola izimali.
Ungathumela futhi imali ngewebhusayithi yenkampani. Lokhu kungenzeka kunikezwe kubasebenzisi abhalisiwe kuphela. Esigabeni esithi "Thumela imali" kufanele ukhethe "Thumela nge-intanethi". Khona-ke uhlelo luzohlinzeka ukugcwalisa ifomu bese ukhetha indlela yokudlulisa. Ukuqinisekisa isicelo senombolo ecacisiwe kuyofika i-SMS ngephasiwedi. Ekupheleni kwenqubo, ukudluliselwa kuzokwabiwa ngenombolo yokulandela (CNDP), okumele ikwaziswe kumamukeli.
Kukhona okuhlukile kokubhaliswa kwesicelo ngocingo. Kodwa izimali zizokhokhiswa kusuka ekhadini lebhange. Ungakwazi futhi ukudlulisa imali nge-self-service terminals. Le nkonzo inikezwa yinkampani e-Eleksnet eSt. Petersburg kuphela. Uma wenza umyalo, ufaka izicelo ezifanayo (igama, ikheli, inani). I-CNPC izobe ibalwe ohlwini lokuthola, okuzophrinta emva kokuhumusha kuqediwe. Kumakhasimende amasha, izofaka futhi inombolo yekhadi lebhonasi yaseWest Union. Ngosizo lwaso ungathola isaphulelo lapho ukhokha ikhomishini.
Ngingabheka kanjani isimo sesicelo sami? Iwebhusayithi yenkampani kufanele ifakwe efomeni ekhethekile. Inombolo nekheli lokulawula.
Uma wenza isicelo kubalulekile ukucacisa igama. Umamukeli nezwe ngokubhaliselwa kwamagama aseRashiya. Uma kuphakama ubunzima, kungcono ukusebenzisa ithebula lezincwadi zama-alphabet zesiRashiya nesiLatini. Ngakho, ohlelweni "eMoscow" lubhalwe njengoMoskva, "iSt. Petersburg" njengoSankt Peterburg, njll.
I-Western Union yenkampani ngo-2008 yaqala uhlelo lokwethembeka kumakhasimende avamile. Isekelwe ekusungulweni kwamabalazwe okunciphisa kakhulu isikhathi sokucubungula nokukhomba ukuhumusha. Ngemuva kokuthengisana ngalunye, ikhasimende linikezwa amabhonasi, angasetshenziswa ukukhokhela izinsizakalo.
Ukusetshenziswa kwezinsizakalo ngenjongo yokuthengisa noma yokutshala izimali kuvunyelwe. Ukudluliswa okuvela eRussia kunomkhawulo we $ 5,000 noma inani elilinganayo ngama-ruble ngosuku. Abangewona abahlali bangathumela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-225. Izinkampani zomthetho umkhawulo ohlukile usethe - amashubhu ayizinkulungwane ezingu-150. Ukuthengiselana kuvame ukwenza ngaphandle kokuvula i-akhawunti. Imithetho yesistimu isetha imingcele yayo: ayikho ama-ruble ayizinkulungwane eziyikhulu. (Ama-dollar ayizinkulungwane ezingu-3).
Ngokusho kwabaphathi benkampani, isikhathi sonke somsebenzi sasingekho icala elilodwa lapho ukudluliselwa kungakhishwa. Kodwa lokhu akusho ukuthi akukho amaphutha lapho wenza isicelo. Ukudluliselwa okunjalo kuvinjelwe. Ungathola izimali ngokuvakashela igatsha lenkampani, unikeza ipasipoti kanye ne-CNPC. Amaphutha ajwayelekile kakhulu:
Igcwalisiwe ngokungalungile Umamukeli noma umthumeli;
U-opharetha udidekile ulwazi lomamukeli nomthumeli lapho edlulisa ulwazi.
Ukuthengiswa okungaziwa kusistimu yezinyanga ezingu-4. Umthumeli angawususa nganoma yisiphi isikhathi. Khona-ke ukudluliselwa kudluliselwa ku-archive. Usengayithola imali, kodwa inqubo izothatha isikhathi eside. Ungakwazi ukuhoxisa okuthunyelwe, kodwa kungakapheli ukuhunyushwa. Ngenxa yalokhu kuyadingeka ukuthi ufake isicelo emnyangweni lapho isicelo sakhiwa khona, nekhophi yeresi (CNDP) kanye nepasipoti yokuqala. Kuzo zonke izimo, imali yokucubungula ayibuyiswa.
I-Western Union iyindlela elula futhi ephephile yokudluliselwa phakathi kwabantu ngabanye. Kodwa ngesikhathi esifanayo kuyabiza kakhulu. Ezinye izinsiza zenza izinhlelo zokusebenza eziku-intanethi ngaphandle kokubhalisa kuqala ohlelweni nokukhokha izinsizakalo zabo imali ephansi. Indlela yokuthola imali "Western Union"? Kwanele ukufaka isicelo egatsheni lendawo yasebhange, unikeze ipasipoti kanye nenombolo yesicelo esiyingqayizivele. Izimali zinikezwa ngemali noma zihanjiswe ku-akhawunti.
Ukuphepha. Izinhlobo kanye nencazelo emfushane
Ama-capillari avela ebusweni: uyini nokuthi ungabhekana kanjani nabo?
Izikhangibavakashi ukuze Tel Aviv